Gunyana 25, 2021
Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vanoti vatambira nemufaro mukuru danho ratorwa nekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana munyika, yeZimbabwe Gender Commission, rekuita tsvakiridzo dzakadzama pamusoro pekuroodzwa kana kumanikidzwa kuita zvepabonde kwevanasikana vasati vabve zera.
Vanorwira kodzero dzevanhukadzi, uye vari mukuru wesangano rakazvimiririra re Women Action Group, Amai Edinah Masiyiwa, vati vatambira nemufaro danho ratorwa neZimbabwe Gender Commission.
Vatiwo vane chivimbo chekuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana kuchadzikisawo nyaya dzemhirizhonga dzinoitika mudzimba.
Mumwe murwiri anorwira wekodzero dzevana, Amai Chinga Govhati, vatiwo kunyange hazvo vaive neshuviro yekuti dai izvi zvakaitwa kare, komishini yeZimbabwe Gender Commission iyi yaratidza kuti ine hany’a nekuchengetedza kodzero dzevana vasati vabve zera.
Amai Govhati vatiwo komishini iyi yagonawo kunangana nechechi dzechipositori sezvo dzimwe dzacho dzine zvitendero zvinobvumira kuti vanasikana vasati vabvazera vaitiswe zvepabonde pamwe nekuroodzwa.
Asi munyori muUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Tsvakai, vati yanga iri shuviro yavo kuti tsvakiridzo iyi isangonange chechi dzechipositori chete, asi kuti munhu wese anomanikidza vanasikana vasati vabva zera kuita zvepabonde.
Komishini iyi yakazivisa nezuro kuti yatanga tsvakiridzo yekutyorwa kwekodzero dzevana vasati vabvazera vachimanikidzwa kuitwa zvepabonde kana kuroodzwa muchechi dzechipotsori.
Komishini iyi yakazivisawo veruzhinji kuti vane zvavanoda kumhangara nezvenyaya idzi vanokwanisa kunyora tsambambozha, kutumira mashoko avo kuWhatsApp number 0719554465 kana kuenda kukomishini iyi musi wa25 Gumiguru usati wapfuura.
Hurongwa uhu hunouya panguva iyi mumwe murume wekuManicaland, Hatirarami Momberume, vari mutirongo mushuremekusungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana aive nemakore gumi nemana, Anna Machaya, uyo akashaya panguva iyo aisununguka mwana wake kwaMafararikwa mudunhu reManicaland.
VaMomberume, avo vane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa, inhengo yemapositori ekwaJohanne Marange.
Anna, uyo akawadzirwa nevabereki vake kuna VaMomberume, akafa mwedzi miviri yapfuura apo aisununguka pamuviri panonzi akaitiswa naVaMomberume.